I-Bohemian VILLA enhliziyweni ye-Barranco
Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima, i-Peru
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Juan
Le villa yeminyaka eyi-100 esanda kulungiswa ene-2BR, indawo yokuhlala umlilo, amagumbi okuhlala ama-2 kanye negumbi lokuphumula elizimele eliphezu kophahla itholakala enhliziyweni yeBarranco. Le ndawo yaziwa ngezindawo zayo zokudlela ezinhle, izindawo zokudlela ezithandwayo kanye nezindawo zobuciko. Uzoba seduze ne-"El Malecón", i-cliff-side boardwalk ka-Barranco edumile, izindawo zokudlela ezinjenge-Central, Isolina noma i-La 73 kanye negalari yobuciko njenge-MAC ne-MATE.
Qiniseka ukuthi ungena nathi ukuze uthole i-App yakho ye-concierge yomuntu siqu.
I-Barranco izuze udumo njengesifunda se-bohemian e-Lima ngenxa yezakhiwo zayo ezikhanyayo, ubuciko bomgwaqo obuhle, nemigwaqo ebukekayo.Kuphinde kube yikhaya lamabha angcono kakhulu e-Lima nezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili - futhi nakanjani ezinye zezitolo zekhofi ezihamba phambili.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lima namaphethelo